Manasongadina ny Olan’ny Lalànan’ny Fitenenan-dRatsy An’Andriamanitra sy ny Tsy Fisaziana ao Pakistan ny Didim-Pitsarana Amin’ny Raharaha Mashal Khan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2018 5:22 GMT
Mashal Khan. Loharano: Facebook
Tamin'ny 13 Aprily 2017, nodarohan'ny mpiara-mianatra aminy sy notifirina ho faty i Mashal Khan, mpianatra ho mpanao gazety rehefa nendrikendrehana ho manivaiva an'Andriamanitra. Manodidina ny 61 ny isan'ny mpianatra nosamborina noho ny famonoana an'i Khan. Tamin'ny 7 Febroary 2018, nodidian'ny fitsarana Pakistaney ho faty i Imran Ali noho ny nitifirany an'i Khan. Dimy amin'ireo mpianatra no nodidiana higadra mandra-pahafaty, 25 nomelohina tamin'ny fandikan-dalàna madinika, ary 26 noafahana madiodio.
Taorian'ny namoahana ny didy, maro ireo nizara ny heviny tao amin'ny media sosialy. Ity ihany koa no namelona indray ny adihevitra amin'ny hoe fotoana ve izao hanavaozana amin'izay ny lalànan'ny fanivaivana an'Andriamanitra mifehy ny firenena.
Iza moa i Mashal Khan?
Mpianatry ny Oniversite Abdul Wali Khan avy ao Mardan i Khan ary 23 taona (nolazaina ho 25 taona any amin'ny media sasany) izy. Nisy nidaroka izy rehefa nisy tsaho mandreraka be mifandrohy aminy tany amin'ny pejy Facebook maro miampanga azy ho nanivaiva ny Islam. Maty noho ny ratra nahazo azy tamin'ny tifitra basy izy raha mbola nifampiraharaha tamin'ny andian'olona ny polisy. Hita taty aoriana fa tsy nitombina ny tsaho.
Niteraka fahatezaram-bahoaka izay nanampy tamin'ny fanerena ny governemanta hitsara ireo tafiditra tamin'ny famonoana ilay mpianatra ny famonoana ny Khan. Nampiasa ny tenirohy #JusticeForMashal ny fanentanana.
Nandritra ny fitsarana izay nambara tamim-bahoaka, ary notontosaina tao amin'ny Fitsarana miady amin'ny fampihorohoroana tao Haripur, nomena fiarovana manokana ny fianakavian'i Khan noho ny fandrahonana tsy ankiato nahazo azy ireo.
Ny didy fanamelohana navoakan'ny fitsarana no manamarika ny fahombiazan'ny polisy pakistaney voalohany tamin'ny fanamelohana andian'olona tamin'ny trangan-daroka sy vono nataon'olona maromaro.
Saingy nilaza tao amin'ny BBC amin'ny teny Urdu i Iqbal Khan, rain'ilay mpianatra nisy namono fa mbola mitady ny rariny ny fianakaviana satria afa-mivezivezy malalaka ny 26 amin'ireo voampanga na dia tao anatin'ny andian'olona namono ny zanany aza izy ireo.
Naelin'ny bilaogera Imran Khan izay mampahatsiahy ny manampahefana fa mihoatra ny enina ireo olona miharihary fa nandray anjara tamin'ny famonoana an'i Mashal Khan ny rainy.
Famonoana ho faty iray sy fanagadrana mandra-pahafaty dimy tamin'ny fitsaram-bahoaka noraketina an-dahatsary? Azo itokisana fa nihoatra ny enina ireo olona nandray anjara.
Manantena i Syeda Trimzi, mpianatra fa hampihena ny toe-javatra tahaka izao ity didim-pitsarana ity:
Amin'ny farany rariny izao …
Enga anie mba ho ny raharaha MashalKhan no farany ary tsy hisy intsony ny reny hamoy ny Mashal-ny
Izay ihany koa ny hafatra avy amin'i Meena Gabeena, mpanao gazety:
Arahabaina i Pakistan fa nahare ihany ny amin'ny hanasaziana ireo olona manao heloka bevava noho ny fankahalana… Fotoana izao hanandratana ny feo sy hiasana mafy hisorohana ny raharaha tahaka ireny aloha fa tsy mitabataba hanasaziana rehefa vita ilay zavatra.
Aitzaz Hassan ao amin'ny Blaogy Pro Pakistani nilaza fa dingana iray mankany amin'ny lalana marina ny fitsarana ary nomarihany:
Mbola hiandry sy hijery isika raha misy ny niaraka tamin'ny andian'olona ho tonga amin'ny fampanjakana ny lalàna rehefa hampakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana ny voampanga.
Fandraisana ho Maherifo ireo noafahana madiodio
Mandritra izany fotoana izany, nisioka ny lahatsarin'iray amin'ireo noafahana madiodio izay nieboebo tamin'ny frandraisany anjara tamin'ny famonoana sady nilaza fa nanao izany ho fiarovana ny fivavahany izy ny mpisolovava sady mpikatroka Jibran Nasir.
Nahazo fandraisana maha-maherifo azy tao Mardan i Aizaz, mpianatra iray hafa noafahana madiodio. Notondrahana felam-boninkazo izy ary nataon'ny mpanohana azy teo an-tsorony, ary niteny ireo mpitsena azy tamin'ny teny Pashto izy fa “hiafara tahaka an'i Mashal” izay rehetra manivaiva ny fivavahana na miteny manohitra an'i Khatm-e-Nabuwwat (ny finoana fa ny Mpaminany Muhammad Fiadanana Anie ho ao Aminy no mpaminany farany).
Taorian'ny famoahana ny didy, nisy ny fidinana an-dalambe notontosain'ny vondrom-pivavahana sasantsasany miantso ny hanafahana madiodio ireo voampanga rehetra.
Fitenenan-dratsy sy tsy fisaziana
Taorian'ny famonoana an'i Mashal Khan, nanoratra ny toe-tsain'andian'olona sy ny fankahalana namonoana ilay mpianatra i Sohail Khan mpamakafaka ara-politika :
Lasa mora ny momono olona amin'ny alalan'ny fivavahana rehefa notaizana tamin'ny fomba manokana ianao. [..] Asehoseho ho fahasamihafan-kevitra ny fanavakavahana ara-pivavahana. Avoaka ho famakafakana ny Fatwas. Lasa ironana amin'izao fotoana izao ny milaza ny hafa ho kafir, tsy mahatoky, tsy mpino an'Andriamanitra (amin'ilay tsy fahatakaran'ny vahoaka azy), tsy mpino, benahoana, fahavalon'ny Islam. Amin'ny fahalalàna keliny. torohay Wikipedia, fiainana tsy sahaza, tsy fahombiazana manokana, mora tezitra sy lava lela, mameno ny toerana ireo mpankahala ireo – manimba saina, manapoizina fo, manamaizina fanahy. [..]
Namelona indray ny adihevitra amin'ny anjara toeran'ny Islam ao amin'ny fanjakana sy ny fiarahamonin'i Pakistan tamin'ny fomba izay tsy hitan'i Pakistan mihitsy teo aloha.
Mila melohina ihany koa ny kolontsain-tsy fisaziana izay manome rariny ny famonoana raha vao misy fiampangana fitenenan-dratsy an'Andriamanitra. Mifandrohy amin'ny famonoana olona am-polony ny lalànan'ny Fitenenan-dratsy an'Andriamanitra ao amin'ny firenena noho ny fepetra ‘henjana’ ao aminy izay trandrahan'ny sasany manana antony mampisalasala.
Anisan'ny maty tamin'ny filazana fa niteny ratsy an'Andriamanitra izany ny politisiana Salman Taseer izay ny mpiambina azy ihany no nitifitra azy tamin'ny taona 2011 noho ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny lalàna. Nahindrahindran'ny mpivavaka mpitrifana maro ity mpiambina manokana an'i Taseer ity, izay novonoina ho faty tamin'ny herintaona.
Mba hisorohana ny fanendrikendrehana, nangataka tamin'ny Parlemanta tamin'ny Aogositra 2017 ny Fitsarana Tampony hanitsy ny lalàna amin'ny fampidirana fepetra manasazy ireo mpanendrikendrika.
Misy ireo mino fa fanararaotra ity didim-pitsarana raharaha famonoana an'i Mashal Khan ity ijerena indray ny Lalànan'ny fanivaivana an'Andriamanitra sy hiantohana fa tsy ampiasaina hanamarinana ny fanaovana herisetra amin'ireo vitsy an'isa ara-pivavahana.